I-50 YEEGIYA ZEMFAZWE IITATTOO UYILO LWAMADODA -IMIDLALO YEVIDIYO YEENKCAZO - UHLOBO
I-50 yeeGiya zemfazwe Iitattoo Uyilo lwaMadoda -Imidlalo yeVidiyo yeeNkcazo
IiGiya zoMlo iiTattoo lukhetho oluthandwayo kubafana abathanda ukudlala phantse ngokuthanda kwabo ukufumana i-inki entsha. IiTattoos zingene nzulu kwiiGiya zeNkcubeko yeMfazwe, ingengabo abalandeli kuphela kodwa abalinganiswa boqobo bezemidlalo.
Izimvo ezinokubakho zemfazwe zibandakanya iCrimson Omen, ekufanele ukuba ifakwe i-inki ebomvu, kusetyenziswa umbala omnyama ukubonisa ubume, inkcazo kunye nendawo engeyiyo. I-Crimson Omen ifaka ukhakhayi oluthambeke kancinci ngaphambili, kunye ne-cog ebekwe nje emva kwayo. Le tattoo ibijongeka ngathi ipholile ikakhulu ngesikhumba esikrazukileyo okanye yenziwe kwisitayile se-polka.
Olunye uhlobo lweGiya leMfazwe oludumileyo lubandakanya ukakayi owaziwa kakhulu kunye nesimboli yeelancer ezimbini. Oku kunokwenziwa ngombala omnyama nokungwevu, kodwa kuya kujongeka kulungile ngentsimbi eblue.
Abanye abalandeli be-GOW banokuthanda umbono we-Skorge tattoo ukumela uthando lwabo lomdlalo. USkorge ngumntu omnyama, okhohlakeleyo onxibe isikrweqe kunye nesigcina-ntloko, zonke eziboleka kakuhle kunikezelo olunzima oluntsundu nolungwevu. Isishwankathelo esingqindilili kunye nokufiphaza ngononophelo kuyakwenza lo mlinganiswa weGiya ubonakale.
Nokuba ngowuphi umbandela ngqo, ukusuka kwi-cog elula ukuya kumkhono opheleleyo obonisa imeko yedabi, kunzima ukungahambi kakuhle ngesiqwenga somxholo seGears of War.
umvambo phezu kwegxalaba
ingelosi amaphiko anehalo tattoo
Izimvo zethayile yangaphantsi emhlophe emhlophe
Idesika enezishelufu ezakhiweyo
iiTatoo ezinqamlezileyo ezilula zabafana
I-inki yomvambo isuswe ngokupheleleyo
Iimpawu zakhe kunye nezincinci